Xuquuqda cadaalada (garsoorka) dacwada magangelyo doonida | Dina Rättigheter
Xuquuqda cadaalada (garsoorka) dacwada magangelyo doonida
Waxa aad xaq u leedahay in aad magangelyo codsatid.
Waxa aad xaq u leedahay magangelyo hadii sababo ansax ah haysatid.
Waxa aad xaq u leedahay in turjumaanka, qofka arima- haaga ka shaqaynaya iyo qareenka/xeer yaqaanaha aad ku codsatid jinsiga uu yahay.
Waxa aad xaq u leedahay in aad kulan ku gaar ah la yeelatid qareenka/xeer yaqaanaha iyo waaxda socdaalka.
Sida qanuunka Utlänningslagen 4 kap1 § (qaanuunka ajaanibka) qaybtiisa 4 uu qorayo. qanuunka qaxooti ´´waa qof dareemaya cabsi, dabagalis ku salaysan jinsi ama nooc, dhalasho, fikrado siyaasadeed ama diineed ama ku salaysan jinsiga uu qofku yahay(naag,nin) fikrado ku saabsab galamada ama isutaga ama ka tirsan qayb mucayn ah ee bulshada, qofkan oo aan awoodin ama cabsi awgeed aan rabin inuu badbaadin ka helo dalkiisa, intaas oodhan waa in ay ku dhisantahay xaqiiq.
Sidoo kale qaxooti waxaa noqon kara ama loo arki kara qof ajinabi ah oo aan dalkiisi dawladi kajirin taas oo ay ka danbayso sababaha kor ku xusan, qofkaas oo ka jooga dibada wadankii isagu ama iyadu ay markii hore si caadi ah ugu noolayeen hadana aan awoodin in ay ku noolaadaan ama cabsidooda awgeed an rabin in ay ku noqdaan.
Ficil ahaan si aad xun baa qaanuunkan loo hirgeliya ama loo raaca. Taasina waxa ay ku dhisantahay aqoon darada aadka u xun ee waaxda socdaalka ka haysta xeerarka ku shaqale, iyo iyaga oo haysta fikrado aan la xaqiijin ama asaas lahayn sidoo kale isfahan darada wadashaqaynta go´aan gaarayaasha kala duwan. Waxaa jira mar marka qaarkood rabid la aan ama waqti yaraan sii loo guda galo ama loo ogaado sababahaaga khaaska ah ee ku soo qixiyay, qofkaagan dumarka ama qofkaagan-HBTQ ah.
Si aad aad magangelyo u heshid waxay waadxa socdaalka kaa rabtaa in aad cadayn kartid sida ay kuugu dhacday dabagelis(raadin), qasabid(xoog) iyo in aad cadayn kartid in aad khatar u gelaysid qasab(xoog) mar labaad hadii aad ku noqotid. Dadka xitaa keena cadaymo ad adag marka ay magangelayo waydiisanyaan waaxda socdaalka intooda badani waxa ay helaan diidmo.
Codsashada magagelyo mar labaad:
4 sani kadib markii aad diidmada heshid, ayaad codsankartaa magangelyo mar labaad. Markaas ayaa waxaa bilaabmaya dacwad cusub oo lamid ah tii hore, laakin tii hore wax yeelo ayay ku samayn kartaa dacwada cusub, Sababta oo ah waaxda socdaalka waxa ay is waydiinaysaa in magangelya doonistada cusubi ku salaysantahay sababihii tii hore mise waa sababa cusub. Ficil ahaan waaxda socdaalku inta badan waxa ay dib u soo saarta sababihii hore markaas ayay ku dartaa codsiga cusub iyo sababa cusub.
Qofkaaga ku noolaa sharci la´ aan weligiina aan xiriir la yeelan waaxda socdaalka:
Hadii aadan weligaa magangelyo codsan laakinse badbaadin u baahantahay waxa aad xaq u leedahay marwalba in codsigaaga lagu fiiriyo dalka Iswiidhan. Sidaa waxaad lamid tahay dadka sida tooska ah Iswiidhan u yimaada una codsada magangelyo. Hadii aad lahaan jirtay oggolaansho (sida oggolaanshaha shaqada ama dal ku gal –viiso dalxiis) oo aad heshay go´aan tarxiilid, wixii intaa ka danbeeyay aad sharci la´aan ku noolayd, markaa xaalada dacwadaadu xooga ayay ka duwantahay in aad dib ugu soo noqotid codsiga magangelyada. Wac xafiiska talobixinta: 0200-880066 (waa bilaash) si aad faahfaahin u heshid.
Khatarta dabagelista-raadsiga, dabagalkaas oo ku salaysan inaad dumar tahay ama qof-hptq tahay, khatartaas awgeed ayaa laga yaabaa ina aad sifo qoxootinimo ku heshid. Khatartan dabagalku wax ay ahaan karta amid kaaga timaada xaga dawlada (sida booliska,ciidanka milletariga ama hey´adaha dawlada) ama dabagelis ka socota ninkaaga/kii kula noolaa, qoyskaaga ama dadka kale.
Hadii aad ka soo qaxday dabagelida dawlada ama dad gaar ah, sababta laguu dabagelayo oo ah in aad tahay khaniis ama dadka u galmaado labadam jinsi (nin-naag) ama jinsi bedale marka waxa aad xaq u leedahay magangelyo.
Dabagalka sababtiisu tahay fikirada siyaasadeed waxa ay kelifi karta in aad heshid sifada qoxotinimo. Siyaasadu ma´aha keliya firfircoonida hawlaha xisbiyada siyaadsadeed. Wax ay noqon karta in aad leedahay fikiro dhici kara in ay ka hor tag iyo daandaansi ku samyanya , dawlda,bulshada iyo aragtida qoyska dhinaca jinsiga iyo galmada.
Isku day in aad hal mar si faahfaahsan aad uga sheegtid qareenkaaga iyo waaxda socdaalka dhamaan sababaha magangelyo doonistaada, waxa aan ka wadaa dhamaan dibaatooyinkaaga xaga wadankaagi. Xitaa hadii ay ku saabsantahay waayo aragnimo xanuun leh iyo cabsi qasbid(xoogid), hadidaad dil iyo jirdilka booliska ama ninkaaga ama qaraabdaada.
Isku day in aad muujisid caddayn xoojinaysa cabsidaada, sida waraaq caddayn ah oo wadankaagi ka soo baxday, waraaqo hadidaad ah, shahaado dhakhtareed, markhaati iyo sawiro iyo wixii kale.
Qareenkaaga iyo waaxda socdaal mar walba u sheeg hadii xaaladaada isbadel ku yimaado, sida in waxyaalo cusub ku dhacayaan noloshaada taas oo siyaadinaysa cabsidaada aad ka cabsanasid tarxiilaka.
Fiiri in aad haystid koobiyda dhamaan waraaqaha ku shaqaleh dacwadaada magangelyodoonista.
Hadii dalka Iswiidhan aad ku timid isu keenidd lagu keenay ninkaagi/qofka kula nool oo iswiidhish ah, xiriirkiinii ama wada noolaanshihi dhamaaday, waxaa jira rajo yar in aad sii haysataan sharciga deganaanshaha. Hadii aad ka gaarteen in aad Iswiidhan ku timaadaan isu keenida gaarka ah , oo xiriikinii uu udhamaaday sababo ay ka mid yihiin in adiga ama caruurtaada loo gaystay qasbid(xoog) ama hadii ay jiraan sababo kale oo xoojinaya in aad sii haysatid deganaanshahaaga. Arintani waxa ay khusaysa xitaa raga la nool raga ama naagaha la nool naagaha.
Talo bilaash, taagero & warbixin ku saabsan su´aalaha magangelyada:
Rådgivningsbyrån (xafiiska talobixinta) 0200-880066 (waa lacag laaan)
Amnesty international 08-7290200
Farr-Flyktinggruppernas och asylkommitteernas riksråd 0230-132 45